Ny Sitrapon’Andriamanitra – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Hoy ny Sal 143:10 » Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa Hianao no Andriamanitro, ary aokany Fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin izay tany marina ».
Isan’andro isika, (na olon-tsotra, na mpitantana orinasa, na zatovo)dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra (Décision); ary ny fanapahan-kevitra izay raisintsika, dia miainga amin ny sitrapontsika.
Araka izany dia hetahetatsika Kristiana ny hoe:
– Tsy ho diso ny fanapahan-kevitra raisina
– Hitondra voka-tsoa ny fanapahan-kevitra raisina.
– Ho araka an ‘Andriamanitra izany décision izany.
Ny mampalahelo anefa dia diso fanantenana ny amin ny vokatry ny fanapahan-kevitra raisiny ny maro. Misy aza ny manenina ka lasa manome tsiny an’Andriamanitra mihitsy aza. Misy aza miala amin’Andriamanitra mihitsy ka milaza ho nofitahin’Andriamanitra.
Ka ny filazantsara ho anao anio ry ZFLM dia hoe:
« MANORO ANAO NY SITRAPONY ANDRIAMANITRA »
1- Inona no atao hoe sitrapon’Andriamanitra?
Araka ity Salamo ity dia fitondran’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahiny ho amin izay tany marina. Misy fiteny Amerikana malaza manao hoe: « The right man, at the right time, on the right place ». Izany hoe olona iray amin ny toerana tokony hisy azy marina. Raha Paoly no milaza izany any amin’ny Rom 13 dia » Tsara, sady ankasitrahana, no marina » ny sitrapon’Ilay Raintsika. Satria, ao anatin ny programany dia Tanteraka sy tonga lafatra Izy »Perfect and Omniscient ». Ary fantatsika koa fa Tompon ny zavatra rehetra, ary mihazona ny zavatra rehetra amin ny herin ny Teniny.
2- Inona no ilàna ny sitrapon’Andriamanitra?
a- Hahatonga finoana an Andriamanitra na ho an ny mpanapa-kevitra na ho an ny manodidina azy
Ny tiako homarihina dia toy ny + sy – amin ny Energie io, ka tsy afaka misaraka na oviana na oviana. Izany hoe ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy ho anao irery( +) , fa ho an’ny manodidina anao koa (-). Ny fitambaran io no miteraka ilay Dynamis(herin’Andriamanitra).
Ohatra: Hanao trano ianao, tanjonao ve ny hahatonga olona hino an i Jesosy amin izany?
Raha misy lalam-bola, hahatonga ny olona hahita an i Jesosy ve izany sa higalabonanao?
Hoy Jesosy: » Izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny hahazoan izay rehetra mijery ny Zanaka ka hino Azy fiainana mandrakizay ary Izaho hanangana Azy amin ny andro farany » Jao 6:40.
Araka izany ny ilàna ny sitrapon Andriamanitra dia ny hahatonga fanekena sy fankatoavana Azy ho anao sy ny manodidina anao.
Amin’ny tanjonao sy ny fikasanao rehetra, dia ataovy ny fomba rehetra ahitan’ny olona an i Jesosy.
3- Inona avy ireo dingana arahina amin ny fandraisana fanapahan-kevitra?
a- Mitady an Andriamanitra amin ny fo.
Hoy ny Baiboly »Hitady Ahy hianareo, dia ho hitanareo aho, raha katsahinareo amin ny fonareo rehetra »Jer 29:13. Izany hoe mikatsaka an’Andrimanitra amin ny fo lalina. Mivavaka, mibebaka, ary manaova fanontaniana amin ny tenanao hoe: » Jesosy o, raha Ianao moa no teo amin’ny toerako dia inona no nataonao e?
b- Tarafina amin ny Didy folo ny fikasana.
Ny lalàna dia toy ny fitaratra hizahantsika ny tarehintsika, sy fefy fiarovana antsika. Hijerena hoe mivoana ve sa tsia ny zavatra atao. Raha mijery ny Neh 10:29 isika dia mahita taratra ny fiomanana sy fanapahan kevitry ny Zanak Israely hanaiky sy hiverina amin ny sitrapon Yahweh. Notarafony teo amin ny bokin ny lalàna ny toerana misy azy ireo mialoha ny hirosoany hatramin ny farany ny fanarenana ny Tanàna, ary rehefa hitany fa nanome voninahitra an Yahweh dia niroso izy.
c- Manoka-tena ho an Andriamanitra. Fanoloran-tena izany . Eks 32:29. Izany hoe manaraka tanteraka an Andriamanitra, tsy hoe amin ny fotoana hanapahan kevitra sy hiandrandrana valim bavaka ihany, fa amin ny fotoana rehetra.
Tanteraka amin ny fanarahana an Andriamanitra no filazan ny Soratra Masina azy, toa an i Kaleba. Nom 14:24.
Raha amintsika Loterana izany dia midika ho fanompoana an Andriamanitra ato amin ny Fiangonana, Kristiana tsy mety afa po amin fanompoana Ilay tia azy, ary tia tanteraka ny Rainy sy ilay Mpamonjy azy. Deo 6:4-9.
Ny tiana ambara dia hoe: tsy mijanona ho Kristiana tsotra, fa manao izay azo atao amin ny fitiavana.
Izay no azo natolotra izao maraina izao, fa mbola hojerentsika manaraka ny hoe:
– Inona no fady amin ny fanapahan kevitra efa noraisina sy
– Inona no mahatonga ny olona hanapa-kevitra diso.
Ny sitrapon’ Andriamanitra tapany faha-2
Efa hitantsika tamin ny farany hoe; inona no atao hoe sitrapon Andriamanitra, inona no ilàna azy, ahoana no dingana arahina mialoha ny fanapahan-kevitra.
Fa androany kosa hojerentsika ny hoe; inona avy ireo zavatra fady amin nu fanapahan-kevitra noraisina, ohatra ao amin ny Baiboly, ary farany inona no mahatonga ny olona iray hanapa-kevitra diso.
4- Inona avy ireo zavatra fady amin ny fanapahan-kevitra efa noraisina?
a- Fo mizarazara
Io dia mpahazo ny Kristiana maro, tsy mifantoka tanteraka amin ny antony ilana ny sitrapon Andriamanitra fa mizarazara ny fo. Ny antony dia ao ilay fitiavan-tena dia Adama ela izany. Io ilay mila fibebahana isan andro. Marihiko etoana anefa fa ny voninahitr’Andriamanitra, Jao 11:40, dia tsy ho antsika fa ho Azy, ary tsy hoe zavatra mirentirenty hahitan ny olona hafa antsika izanu voninahitr’Andriamanitra izany, fa araka ny Teolojia antsika Loterana dia « famonjena ny mpanota » sy fanatrehan i Jesosy. Toa an i Paoly sy Silasy nihira hira fiderana, ahitantsika ny fanatrehan Andriamanitra azy mirahalahy na dia ao an tranomaizina, tsy misy mpahita ary nahilika mihitsy aza.
Araka izany ny fanapahan kevitra noraisina dia mila tanterahina hatramin ny farany na dia mety hitondra fahoriana sy fijaliana aza izany.
b- Miroa saina
Ny filazan ny Epistily nosoratan i Jakoba dia: « olona miroa saina izy, miovaova amin ny alehany rehetra ». Ny antony dia tsy ampy vavaka, ary tsy mahafantatra mazava ny tanjona sy anton ny fanapahan kevitra noraisiny. Ka firaisan aina amin i Jesosy no fanafodiny. Hoy ny Jao 15:7. »raha miray Amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angataho…. » Ity firaisan aina amin o Jesosy ity dia vitsy ny Kristiana milona sy miaina amin izany. Nefa io no rivotra hiveloman ny fanahin ny Mino.
c- Maika handray fanapahan kevitra.
Ny ohatra akaiky amin izany dia zavatra hita amin ny fiainana andavanadro amin izao andro manahirana izao. Ohatra misy olona tonga ao aminao milaza hoe misy lalam bola toy izao e! Misy afera toy izao e! Nefa mboma tsy nanaraka akory ireo dingana voalazan ny lesontsika tery aloha. Avy eo anefa dia manenina sy feno fanomezan tsiny an i Jesosy. Oha vakio 1Mpan 18:20-21.
d- Tsy manana fo marina eo anatrehan Andriamanitra.
Hoy ny Sal 78:8. « Mba tsy ho tahaka ny razany, izay taranaka maditra sy mpiodina izy, dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony, sady tsu marina eo anatrehan’Andriamanitra ny fanahiny » . Mampalaelo!
Io dia ilazana olona maloto fo, ratsy tanjona (objectif) ary ny mampalahelo dia mitady filàna miaraka amin Andriamanitra. Izany hoe ny filàny no ataony ambony mihoatra ny sitrapon i Jesosy.
5- Ohatra mpanompon Yahweh ao amin ny Soratra Masina.
Rehefa mijery ny Heb 11:24-27 isika dia ny finoan i Mosesy no resahiny ao. Mahavariana tokoa hoe zanaky ny zanakavavin ny mpanjakan ny 1er puissance mondiale tamin izany Mosesy. Nipetraka tao anaty lapa, niaina ny zava tsoa sy ny luxe rehetra!!!Kanefa nolaviny izany. Enjana sy mahazendana ary mahavariana ny fanapahan kevitra noraisiny, araka io Hebreo 11 io ihany. Alaovo sary an tsaina hoe naleony nofanin Yahweh tany amin ny sekolin ny fahoriana. Eo amin ny an 27 anefa dia « nijery ny tsara lavitra » dia ny fanatanterahan Andriamanitra ny sitrapony aminy Mosesy, dia ny hanafahana an Israely.
Mbola miverina amin ilay lesona teo aloha isika izay amafisin i Mosesy hoe: ny sitrapon Andriamanitra dia ny hahatonga finoana ho anao sy ny manodidina anao.
6- Inona no mahatonga ny olona hanapa-kevitra diso?
– Tahotra: mbola tsy nanomboka akory dia efa matahotra. Ohatra, tsy nisy bus, nefa hianao hody any Ivato, dia nanapa kevitra hianao ny handeha tongotra. Mbola tsy nandeha akory anefa ianao dia efa nanao hoe tsh vitako izany. Nefa raha nametraka izany tamin I Jesosy ianao dia ny fantaro dia fantany anie fa tsy ho vitanao izany amin ny maha Andriamanitra azy e! Fa inoana kosa fa handefa fiara ho anao izy.
– Vola: io dia manjo antsika matetika, manao an i Jesosy ho voafetra » limité ». Tsy ampy ny vola hanatanterahana asa dia mihemotra, izany ve tsy manao an Andriamanitra ho tsy misy. Indraindray koa dia tratry ny fieremana ny sasany ka manimba ny finoan ny hafa.
– Tombotsoa manokana, tsy levona ny fitiavan tena ka araraotin ny devoly. Ary mamotika ny sitrapon Andriamanitra. Eto ao dia manentana antsika handini tena sy hivavaka mafy ho an ny Fiangonantsika tsirairay.
– Olana: mafy ny fisedrana dia tsy mahatana ny fanapahan kevitra fa kivy.
– Famirapiratan’ny Devoly: fitaka ataon’i Satana izany ka mamily tsokelikely ny sitrapon’Andriamanitra.
Izay no azo natolotra, mirary soa ny ZFLM rehetra.
Mpanolotra Johary Faly,
Mpianatra ho Pastora STPL taona faha 3 Atsimoniavoko.
Inona moa ny PENTEKOSTA?
Inona moa ny PENTEKOSTA? Ao amin’ny TT dia antsoina hoe “fetin’ny herinandro.” Ny anarany feno dia ny hoe חַגשָׁבֻעוֹת (chag shavu’ot, firavoravoan’ny herinandro ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 11 Septambra 2016 (Alahady faha-16 manaraka ny Alahadin'ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana tsotsotra momba ny texte izay ho toriana manerana ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 28 Martsa 2016 (Alahadin'ny PASKA)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho solon'ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny sahan'ny FLM amin'ny ...Hanohy hamaky
Tari-dalana Toriteny Alahady 09 oktobra 2016 (Alahady faha-20 manaraka ny Alahadin'ny Trinité)
Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny ...Hanohy hamaky